Pixel Art Studio bụ ụdị ihe osise eserese maka Windows 10. Mmemme Gritsenko kwadebere, dị ka anyị kwurula nelu, bụ ụdị ịbịaru eserese. Ngwa a, nke enwere ike inweta site na Storelọ Ahịa Windows 10, na-enye gị ohere niile nke ngwa eserese eserese. Na mgbakwunye na njirimara oge ochie ị hụrụ na ndị ọzọ na mbụ, dị ka ịhọrọ ahịhịa,...
Ashampoo Home Designer Pro 3 bụ usoro kachasị mma ụlọ ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na kọmputa Windows gị. Na mmemme a kwadebere maka ndị na-abụghị ndị ọkachamara, ọ dị mfe ịmebe mgbidi, uko ụlọ, windo, ibo ụzọ, ala ala, anwụrụ ọkụ, na nkenke, isi ihe niile mejupụtara ụlọ ahụ. Ebe ọ bụ na mmemme ahụ na-eme ihe niile na-akpaghị aka...
Nnukwu eserese ngosi bụ mmemme bara uru ị nwere ike iji lee foto gị wee mee mgbanwe ụfọdụ. Formatskwado usoro dịka BMP, JPG, PCX, TGA na WMF, mmemme ahụ nwere interface dị mfe iji. Mgbe ị na-eji Alternative Pic View, ịnwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi gị na interface na usoro ịdọrọ na-dobe ma ọ bụ site na onye na-enyocha faịlụ kpochapụwo. ...
Site na Ashampoo Photo Commander ị ga-ejikwa foto gị na faịlụ vidiyo niile. Ihe omume a ga aru oru dika igwe okwu nke komputa gi, na enye gi ohere ime akwukwo ndi bara uru. Site na mmemme a, enwere ike idezi ihe eserese, onyogho, odiyo na vidio na ogbe nchekwa mgbe nile. Nwere ike ịkwadebe ihe ngosi mmịfe, dezie nha foto na agba, ma ọ bụ...
Speedy Painter bụ ngwa dị mfe iji nyere gị ohere ịmepụta ihe oyiyi gị ma chekwaa ha. Edere ngwanrọ a nke ọma na C ++ ma jiri ọbá akwụkwọ OpenGL. Ngwa ahụ nwere ikike ịchọpụta nrụrụ pen na ịchịkwa nha ntụ. Ọ na - enye gị ohere ịgbagharị ihe oyiyi ma jiri onyogho enyo. Fọdụ isi atụmatụ nke Speedy Painter: mgbanwe Dekọ ịbịaru usoro na...
FotoSketcher bụ obere mmemme mara mma ị nwere ike iji gbanwee foto dijitalụ gị na sketta pensụl. Site nusoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịme foto gị na pensụl na sekọnd ole na ole, yana inye nsonaazụ dị iche iche. Ọ bụ mmemme nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ ihe ịga nke ọma ị nwere ike iji na kọmputa gị. Ọ bụrụ nịchọrọ ịtụgharị foto nime...
Inkscape bụ ihe mmeghe na-emeghe sọftụwia na-edezi sọftụwia. Yiri usoro mmemme ọkachamara nke na-eji W3C ọkọlọtọ scalable vector graphics file format (SVG), dị ka Illustrator, Freehand, CorelDraw na Xara X, Inkscape dị iche na ha nihi na ọ bụ nefu. Will ga-enwe ike ịkwadebe nsonaazụ ọkachamara na eserese site na mmemme a nefu, nke...
Ndị chọrọ ịdọrọ na kọmpụta ha na-enwekarị nhọrọ iji ngwa Paint nke Windows ma ọ bụ kwụọ ọtụtụ puku dollar maka ngwa ọkachamara. Agbanyeghị, ọnọdụ abụọ ahụ ezughi oke iji gboo mkpa yana mebie ndị ọrụ nihe gbasara oge na ego. Yabụ, ịbịaru ngwa dị ka Krita ghọrọ ihe dị mkpa maka ahụmịhe eserese dị mma. Krita bụ usoro ihe osise nefu nke dị...
EasySignCut Pro, nke na-abịa dị ka onye editọ ihe oyiyi dị ike, bụ otu nime mmemme vinyl na-ewu ewu na mmemme mmemme. EasySignCut Pro, mmemme pụrụ iche ma sie ike na ụlọ ọrụ ahụ, na-eme ka ọrụ azụmaahịa dị mfe karịa na ngwa ọrụ ọ nwere. EasySignCut Pro, yana atụmatụ ya dị elu na ngwaọrụ dị ike, bụ mmemme dakọtara maka ịcha igwe. Site na...
Site na DVD Slim Free, ị nwere ike ịmepụta atụmatụ mkpuchi dị iche iche maka CD, DVD, VHS, PS1, PS2, PS3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, diski BlueRay na ndị ọzọ nihe ole na ole. Ọzọkwa, mmemme DVD Slim Free bụ nefu, dị ka aha ya na-egosi. Atụmatụ Mmemme: Nwere ike ịhọrọ foto gị site na diski gị Nwere ike ịchọ foto mkpuchi na ntanetị. You...
FreeVimager bụ onye na - ekiri ihe oyiyi na ngwa ngwa na nchịkọta akụkọ ihe oyiyi maka Windows sistemụ arụmọrụ. Notu oge, ị nwere ike igwu nkịtị ọdịyo faịlụ, vidiyo na avi format na audio CD na usoro ihe omume. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ mmemme yiri nke a, FreeVimager pụtara dị ka ọ bụ nefu ma nwee ike ịrụ ọrụ karịa otu mmemme yana...
Honeyview bụ sọftụwia dị mfe ma baa uru iji hazie eserese kachasị amasị gị. Ekele maka imepụta ọkụ ya na interface na-agbanwe agbanwe, ọ bụ netiti mmemme nlele onyonyo nke nwere ike ịhọrọ nezie. Na ntọala ị họọrọ noge echichi nke usoro ihe omume, ị nwere ike ịtọ Honeyview dị ka ndabere gị oyiyi ekiri ma ọ bụ tinye ya nokpuru Windows nri...
ExifTool bụ ngwa dị mfe ma bara uru nke ndị na-emeso ihe oyiyi, ọdịyo na vidiyo mgbe niile ga-atọ gị ụtọ. Anyị nwere ike ịsị na mmemme ahụ nwere ike ịgụ, dee na dezie ozi meta na faịlụ nwere naanị otu usoro iwu. Na-akwado ọtụtụ ụdị faịlụ, mmemme ahụ nwere ike ịgụ nke ọma ma gbanwee EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, Profaịlụ ICC,...
Image Racer bụ ụdị foto edezi ngwa na ike ga-eji na-adị mfe. Nezie, enweghị ike ịsị na enweghị usoro mmezi foto na ahịa; agbanyeghị, mmemme ndị ahụ niile nwere ike iwe iwe oge ụfọdụ na ogo ha dị elu yana agwa ha iji jikọta kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-achọ a obere ọzọ ka ndị a mmemme, ebe ị na-atụ anya ogologo loading oge ọbụna maka obere...
Artweaver bụ ngwa onyonyo efu ma dịkwa mfe iji. Can nwere ike ịse ihe site na iji ngwa a, nke a na-eche na ọ ga-enye ndị ọrụ ọrụ ịhe kachasị mma, ma ị nwere ike iji brushes nke nha na ụdị dị iche iche na-eme nke a. Ngwa a mara mma, nke na-enye gị ohere iji ụdị ahịhịa dịka icheku ọkụ, pensụl acha, gouache, mmanụ na agba acrylic,...
Site na mmemme Resizer na-enwu, ị nwere ike ịgbanwe oke faịlụ faịlụ gị na kọmpụta gị iche iche ma ọ bụ nnukwu na pịa ma ọ bụ abụọ. Ọ bụrụ na ị gbalite nhọrọ na ntinye menu na Windows ka ị na-etinye usoro ihe omume ahụ, ịnwere ike imegharị ihe oyiyi ị họrọ site na iji aka nri pịa aka nri. Na mgbakwunye, mmemme ahụ nwere njirimara mara...
Epic Pen bụ usoro ihe eji amamịghe nke toro na EBA. Epic Pen bụ usoro ihe osise ị nwere ike iji na kọmputa gị, mana nadịghị ka ọtụtụ usoro ihe osise ndị ọzọ, ọ na-enye gị ohere ịdọrọ na Windows. Kama nke ya interface, ị nwere ike ise dị ka ị chọrọ ọ bụla omume, akwụkwọ, desktọọpụ ma ọ bụ ndị ọzọ na menu na ugbu a na-emeghe na kọmputa, ma...
ShareX bụ mmemme nnata ihuenyo nke na-enye gị ohere iwere onyonyo site na ihuenyo gị ma kesaa ya ozugbo. Ihe omume a na-enye ihuenyo zuru oke, windo na-arụ ọrụ, square na ọtụtụ nhọrọ nseta ihuenyo dị iche iche. Na mgbakwunye, ịtinye akara ngosi na nseta ihuenyo ị na-ewere, na-ewere nseta ihuenyo na nghọta na ndò ntọala, ma na-ewere agba...
PicPick bụ ngwa imewe dị mfe ma dịkwa nfe. Ihe omume a bu ezigbo onyonyo na ndi editọ eserese maka ndi mmepe software, ndi na ese ihe osise na ndi ulo. PicPick gụnyere ngwa okike ijide onyogho dị ike, nchịkọta akụkọ onyonyo, onye na-atụtụ agba, palette agba na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe ị wụnye usoro ihe omume, ị nwere ike mfe nweta atụmatụ na...
Edezi foto adịghị mfe. Iji dezie foto ọkachamara, ị kwesịrị ịma ọtụtụ nkọwa. Mana ekele maka mmemme FotoGo, ị nwere ike idezi foto na-enweghị mmiri na nkọwa. Agbanyeghị na ọ bụghị ọkachamara, FotoGo nwere ike ịchọ foto gị mma. Ekele maka mmemme a, ndị enyi gị ndị hụrụ foto gị ga-ajụ otu ị siri were ha mara mma! FotoGo bụ mmemme edezi...